Yooba ဆိုတာဘာလဲ | Martech Zone
ရုံကနေမှတ်စုတစ်ခုရတယ် ဆက်သွယ်ပြောဆို (အကြီးအခေါင်းစဉ်) မှာ Yooba.comဒီနွေ ဦး ကိုစတင်ရန်စီစဉ်သောဝက်ဘ်အခြေပြု ၀ န်ဆောင်မှု။ ဗွီဒီယိုသည်အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်သော်လည်း၊ ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Yooba သည်စျေးကွက်ပညာရှင်များအတွက်ဝက်ဘ်အခြေပြု B2B ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏ဖန်တီးမှုနှင့်အောင်မြင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Yooba သည်သင့်အားသင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံအတွက်အားလုံးပါဝင်နိုင်သောပလက်ဖောင်းကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် hosting နှင့် database ဖြေရှင်းမှုများ၊ အကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အကဲဖြတ်မှုအတွက်ကိရိယာများကိုပေးသည်။
အံ့သြဖွယ်အသံများ! ငါလျှောက်လွှာ beta ကိုနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်!
Tags: မြစ်ကြီးနားလွိုင်ကော်အပူတပြင်းထုံJramerklout ရမှတ်ဒေသခံရှာဖွေရေး optimizationမိုဘိုင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းမိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်optimizationရှာဖွေရေး optimizationWordPress
14:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 10 တွင်
ဒီ Clippy က သူနောက်ကိုဆွဲနေတာလား??
14:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 20 တွင်
အိုး! အရမ်းမိုက်တယ်။ 🙂